Inqubomgomo Yemfihlo - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Iluphi ulwazi lomuntu siqu esiluqoqayo kubantu abavakashela iwebhusayithi yethu yebhulogi ?
Lapho abantu be-oda noma bebhalisa kusayithi lethu, ngokufanelekile, ungacelwa ukuthi ufake igama, i-Id ye-imeyili noma eminye imininingwane ukuze ikusize ngolwazi lwakho.
Siqoqa imininingwane evela kuwe lapho ubhalisa esizeni sethu, ubhalisela incwadi yezindaba noma ufaka imininingwane esizeni sethu.
Singase sisebenzise ulwazi esiluqoqa kuwe lapho ubhalisa, ubhalisela incwadi yethu yezindaba, uthenga, uphendula inhlolovo noma ukuxhumana ngokumaketha, uphenya iwebhusayithi, noma usebenzisa ezinye izici zesayithi ngalezi zindlela ezilandelayo:
Asisebenzisi ukuskena kokusongela kanye / noma ukuskena kumazinga we-PCI.
Sinikeza kuphela izihloko nolwazi. Asisoze sicele izinombolo zamakhadi esikweletu.
Asisebenzisi isitifiketi se-SSL
• Sinikeza kuphela izindatshana nolwazi. Asilokothi sicele ulwazi lomuntu siqu noma oluyimfihlo njengamagama, amakheli e-imeyili, noma izinombolo zekhadi lesikweletu.
• Siyaqonda futhi silondoloze izintandokazi zabasebenzisi ngokuvakasha okuzayo.
• Hlanganisa idatha ehlanganisiwe mayelana nethrafikhi yewebhusayithi nokusebenzisana kwesayithi ukuze unikeze ulwazi olungcono lwewebhusayithi namathuluzi esikhathini esizayo. Singase futhi sisebenzise izinsiza ezithenjwayo zezinkampani zangaphandle ezilandelela lolu lwazi esikhundleni sethu.
Uma uvala amakhukhi, Angeke kuthinte okwenziwa umsebenzisi .
Asithengisi, ukuhweba, noma ukudlulisela eminye imibuthano engaphandle kwemininingwane yakho engaziwa ngabanye.
Ingabe sivumela amaqembu wesithathu, kuhlanganise namanethiwekhi wesikhangiso noma ama-plug-ins aqoqa i-PII kubantwana abangaphansi kwe-13?